PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Vs ITIL? သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဘယ်လဲ? - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Vs ITIL? သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဘယ်လဲ?
PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Vs ITIL
အဆိုပါ PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး (Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က) နှင့် ITIL Certiification (သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအခြေခံအဆောက်အအုံစာကြည့်တိုက်) နှစ်ဦးစလုံးလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်တစ်ဦးသည်အလွန်မြင့်မားသောလစာနှင့်အတူထိပ်တန်းအလုပ်လေယာဉ်ဆင်းသက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကိုကျနော်တို့ PMP လက်မှတ်၏အားသာချက်များနှင့်အတူစတင်ပါ။ သငျသညျမစင်နင်းသည့်အလုပ်အကိုင်တက်ပြောင်းရွှေ့ start သောအခါ, ကြမ်းများနှင့်အာမခံချက်များစွာသောသဘောတူညီချက်ကြာပါသည်။
က may ကဲ့သို့ဖြစ်ရ, မှန်ကန်သောသင်တန်းနှင့်အတူထွက်ရတဲ့တစ်ဦး PMP လက်မှတ်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာသည်နှင့်မည်သည့်အချက်အတွေးမှာသင့်ထက်သောအရာတို့ကိုအနည်းငယ်လျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများစေသည်သောအခါအသင်ဤကြဖို့အရေးကြီးနေသည်နိုငျသညျ, လျှင်မြန်စွာတဦးတည်းကိုကြိုတင်ကူညီနိုင်ဘူး။ တစ်ဦးက Cert PMP ၌သင်တို့ကိုသေးငယ်စကေးစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စီမံကိန်းများကိုစောင့်ရှောက်တာပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူပိုကောင်းစွမ်းရည်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ရှိသည်ဖို့သင့်စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါ PMP လက်မှတ်အတူတက်တပ်ဆင်ထားကိုယ့်ကိုကိုယ်ရတဲ့အချို့အကောင်းဆုံးအားသာချက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးခုနှစ်တွင် Unfaltering ကြီးထွား
အဆိုပါ PMP လက်မှတ်သင်တန်းကိုတစ်ဦးတစ်ကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုအလုပ်နှင့်မြေတပြင်လုံးကို Global လူတွေကိုအဖွဲ့ကရိပ်မိရဲ့။ အဆိုပါအိုင်တီအစိတ်အပိုင်းများတွင်အများဆုံးကော်ပိုရိတ်အိမ်များ PMP ကြီးကြပ်ရေးမှူးအာမခံနှင့်ဤကယ့်ကိုသငျသညျကြိုတင်သိမြင်နေသော်လည်းထက်သာလွန်အလုပ်အကိုင်အသင်တို့၏အတိုင်းအတာတိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့အဘို့အစောင့်ဖြစ်ကြ၏။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းကမ်ဘာပျေါတှငျတစျခုစီလူတစ်ဦးသံသယမရှိစနစ်များအုပ်ချုပ်ရေး၏အားသာချက်များကိုသိနှင့်က function ကိုမှာအားသာချက်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်ဘယ်လောက်။ သင်တစ်ဦး PMP လှည့်သည့်အခါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတည်ပြု, သင်သင်တန်းပြုမိကြသူများနှင့်သူတို့အားရုံ PMP ထောက်ခံချက်နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြရတယ်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူချိတ်ဆက်တဲ့သဘောထားကိုရှိသည်။ သငျသညျနေ့စွဲအလုပ်ရွေးချယ်မှုမှတက်ကပိုမှာသာလွန်ရိုက်ချက်ယူမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းစဉ်ဤဆက်ဆက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအဖြစ်သင့်ကြော်ငြာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အလုပ်လုပ်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်။
အဲဒါကိုတတ်လွယ်ခြင်းကောက်ရန်နှင့်အလားတူအဘို့အသငျသညျပြင်ဆင်နေနှံ့နှံ့စပ်စပ်တွေ့ကြုံခံစားသင့်တယ်အသံကဲ့သို့ရိုးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင်တန်းအလုပ်၏အသုံးအနှုန်းများနှင့်ဆက်စပ်အလုပ်တစ်တန်ထိုနည်းတူရှိပါသည်။ သငျသညျအခွင့်အလမ်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဒါ့အပြင် multi-pronged အတွက်သွေးခံရဖို့ get စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ခွဲခြာထည့်သွင်း
အကျိုးဆက်အားသင်တစ်ဦးလမ်းပိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲအဆင့်မြှင့်ကွပ်မျက်နှင့်စီမံကိန်းကွပ်မျက်အဘို့သင့်နေ့စဉ်အဖွဲ့အစည်းကစီမံကိန်းများတွင် actualized နိုင်သည့်စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်၏အောက်ပါအဆင့်ကိုယူဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်ဤသည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစွန်း upgrade နှင့်သင့်စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံတရားဝင်လိမ့်မယ်ပဋိညာဉ်၏အကောင့်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်, အမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများကိုလှည့်ပတ်အလုပ်လုပ်တယ်သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဆင့်မှာထိပ်တန်းအသင်းအဖွဲ့များပစ်မှတ်ထားဖို့စွမ်းရည်ရှိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျထိုနည်းတူထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းများတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း၌နေသောသူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူချိတ်ဆက်မည်, သင်အမှန်တကယ်အကူအညီများသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များ Ace ကြောင်းဟောပြောချက်များနှင့်စုဝေး၌မဆက်ဆံနှင့်နိုင်ပါတယ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့က PMP လက်မှတ်သင်တစ်ဦးမဟုတ်သောအာမခံသူတစ်ဦးချင်းစီထက်သာလွန်သည်စီမံကိန်းညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်မယ့်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်ကြောင်းအဓိပ်ပာရဲ့။ သင်အမှန်တကယ်ဒီဂရီရရှိသည့်အခါ, သင်ပိုမိုတောင်တက်နှင့်ပိုပြီးလစာတွေ့မြင်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
သင် PMP လက်မှတ်နှင့်အတူဘောင်းလာတစ်ချိန်ကဤသည်အဆက်မပြတ်ပေးထားသည်။ တစ်ဦးကစီမံကိန်းဒါရိုက်တာတစ်ဦးစီမံကိန်းအတွက်အပေါ်တစ်ဦးအရာစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောထောင့်နှင့်အတူငယ်များစကေးသဘောတူညီမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် PMP လက်မှတ်ခွဲခြာစီမံကိန်းဦးစီးချုပ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုရှိကွောငျးထိုကဲ့သို့သောညွှန်ကြားထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုရိုးရှင်းစွာအချက်အလက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတိုင်းအတာနှင့်အတူအသီးအသီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းနားမလည်ကြကုန်အံ့။ အိုင်တီ geniuses များအတွက်အဖြစ်ဝေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများရှိပါသည်ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခက်အခဲများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်, ITIL သို့မဟုတ်အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံစာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု hones စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လူသိများတဲ့အနေအထားယူဆရန်စတင်ခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါ ITIL Cert သည် ITIL ဖောင်ဒေးရှင်းအကြားကွဲကွာနေသည် ITIL အလယ်အလတ် နှင့် ITIL ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်ဆင့်။
ယင်းလက်မှတ်များ၏အကျိုးစီးပွားအချက်များကျေးဇူးရှိပါတယ်။ သူကအတိအကျဝန်ဆောင်မှုကွပ်မျက်မှန်းထို့ပြင်အခြားအရာတစ်ခုခုနားမလည်သောနည်းလမ်း data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုချောမွေ့နိုင်ပါတယ်ကတည်းကတစ်ဦးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ITIL သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအပ်နှင်းသောဖြစ်ရပ်အတွက်သူတကယ်ပဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဘို့ရှိသမျှကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ထိုနည်းတူအဖြစ်ဝေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး, စီမံခန့်ခွဲသူဒါမှမဟုတ်ပင်နှင့်အိုင်တီအကြံပေးအဖြစ်တဦးတည်းရဲ့အာရုံစိုက်အစွန်း upgrade ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါလက်မှတ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးသောဖြစ်ရပ်၌, သင်တကယ်အိုင်တီဌာနခွဲအတွက်အခြားသူတွေများ၏ရှေ့မှောက်၌ဆက်လက်ရှိနေရန်အဖြစ်ဝေးတစ်ဦးချင်းစီ drive ကိုအဖြစ်တာဝန်တစ်ခုလာမည့်အဆင့်အထိဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ခြီးမှမျးပစ္စည်းရယူဖို့ရန်သင့်အားသြဇာလွှမ်းမိုး။ ITIL အောင်လက်မှတ်၏ finish ကိုအတူ, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတစ်ဦးထက်ပိုသောဆုံးမဩဝါဒပေးခံရဖို့စိတ်သဘောထား, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အိုင်တီအထူးပြုအတွက်လေးစားမှုကိုအခြေခံပြီးအလေ့အကျင့်ချဉ်းကပ်မှုဆီသို့ရွေ့လျားပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူထိရောက်သောရှိသည်။ ITIL အောင်လက်မှတ်နှင့်အတူသင်အမှန်တကယ်ပတ်လည်နှင့်ဤအရပ်ကြောင်းစွမ်းရည်ပညာရှင်များအတွက်ပုံမှန်စကားပြောဆိုရန်စတင်သင်တစ်ဦးထက်ပိုသော grounded စနစ်နှင့်အမျှဝေးအိုင်တီစွမ်းရည်အဖြစ်ပိုပြီးဌန်၏ဝဘ်ရိုက်ထည့်ဖို့ကိုစတင်ပါ။
လက်မှတ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အိုင်တီနှင့်အတူအပ်နှင်းဒါရိုက်တာကယ့်ကိုသူတို့ကအတိအကျအထဲတွင်ရှိသမျှသောကွပ်မျက်ဒေတာမှန်းနိုင်ပါတယ်ကတည်းကသိသိသာသာပိုပြီးသိသာတစ်ဦးချင်းအဖွဲ့အစည်းကမှတက်အဆုံးသတ်ရှေ့ဆက်သွားရလိမ့်မယ်။ အများကြီးကဲ့သို့သောလုပ်နေတာ, ထိုနည်းတူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းပိုင်းနှင့် client များနှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှင့်စာပေးစာယူစစျဆေးဖို့စွမ်းရည်ရှိခြင်းစဉ် ITIL Cert ပတ်ချာစွမ်းရည်တစ်ဦးအကူအညီနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်မည်ဟု, သငျသညျတခု ITIL အောင်လက်မှတ် PMP လက်မှတ်ထက်ဖွင့်လှစ်ရန်ဆိုနိုင်သည်လျော့နည်းခက်ခဲခွံမာသီးကြောင်းသတ်မှတ်ဖို့ရှိသည်။ နောက်ဆုံးကသင့်ရဲ့အဆုံးမှာပြင်ဆင်နေလုံ့လဝီရိယအလုပ်၏ဧရာအစီအစဉ်ကြာနှင့်စေ့စေ့စပ်စပ်သောလမ်းများအတွက်နာမည်ကြီးအရှုပ်တော်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်တန်း၏, ကောက်ဖို့လက်မှတ်အကြောင်းပြချက်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပြီးမှီခိုသင်၏ IT အလုပ်အကိုင်အတွက်အတိအကျသငျသညျနိုးနိုးကြားကြားရာ၏အလငျး၌မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းပစ်မှတ်ခွဲထုတ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုတင်သွင်းထားပြီးသောမြေပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သငျသညျထိုနည်းတူကုန်ပစ္စည်းတတ်နိုင်သမျှ: -ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ
သငျသညျသုတေသနနှင့်မည်သို့တိကျစွာတစ်ခုချင်းစီကိုယခုနောက်တဖန်အလုပ်ပစ်မှတ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကျေနပ်ရန်သင့်အား enable ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးလမ်းပိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲ PMP အဘို့အသွားနိုင်သင့်လျော်သောစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပြသနိုင်ဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တစ်ခုလက်မှတ်လိုအပ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်း opportunitiesn Ocarreer ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအိုင်တီ-based Service ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း်အတှေးအဘို့အစောင့်သောဖြစ်ရပ်အတွက်သင်အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲ PMP ထက် ITIL အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်သီးခြားသင်တန်းအကျင့်ကိုကျင့်ကြကတည်းကနှစ်ခုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းဆက်စပ် header ကိုတစ်ဦးခေါင်းစဉ်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာပညာတတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အခြေချရန်တစ်ဦးအိုင်တီအဖြစ်သင်တို့အပေါ်၌မှီခိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ITIL ကဘာလဲ? ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ?
လေ့လာမှုမှတ်စုများ, သိကောင်းစရာများနှင့်PMP®စာမေးပွဲ Update ကို - 2018 အတွက် PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Get ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း